Siyaasiyiintii lagu qabqabtay Kismaayo oo loo musaafuriyay Muqdisho – SBC
Siyaasiyiintii lagu qabqabtay Kismaayo oo loo musaafuriyay Muqdisho
Galinkii dambe ee shalay garoonka diyaaradaha Aadan Cade International Airport ee magaalada Muqdisho waxaa laga soo dejiyay Siyaasiyiin qalalaase ka waday magaalada Kismaayo islamarkaana qaab musaafuris ah ay ku soo qaaday diyaarad siday dad ku dhaawacmay dagaaladii Kismaayo oo Muqdisho qaab daweyn ah loo keenay.
Siyaasiyiinta la gaarsiiyay Muqdisho ayaa waxaa ku qabqabtay dagaaladii ka dhacay magaalada Kismayo ciidamada Maamulka Jubaland iyadoo la magagan geliyay ka dibna go’aan lagu gaaray in loo musaafuriyo magaalada Muqdisho sida aan wararka ku heleyno.
Iftiin Xasan Baasto, Cabdi Baaleey, iyo Cumar Buraale ayaa lakala dhahaa siyaasiyiinta abaabule yaasha ka ahaa dagaaladii ka dhacay Kismaayo islamarkaana musaafuriska ku gaaray Magaalada Muqdisho.
Inkasyoo aan jirin warar xaqiijinaya sababaha siyaasiyintaasi logu musaafuriyay magaalada Muqdisho ayaa hadana waxaa la xaqiijiyay in ciidamada Kenya oo gacanta ku hayay ka dib qab qabashadii loo geystay ay xoog ku saareen diyaarada qaadeysay dhaawacyada oo garoonka kismaayo fadhiday.
Dhinaca kale ku dhowaad 50 qof oo dhaawacyo halis qaba ayaa la gaarsiiyay magaalada Muqdisho xarunta dalka si halkaasi loogu dabiibo maadaama xaalada isbitaalka Kismaayo aanu iminka aheyn mid lagula tacaali karo dadkan.
Madaxweynaha Jubaland ayaa ka dib dagaalada dhacay baaq ka soo saaray xaalada dadkan dhaawaca ah, ayna u baahan yihiin gar gaar daweyn deg deg ah.